Yintoni i-USB 3.0 HUB? | I-Huachuang Elektroniki
Umgangatho we-USB 3.0 owabonakaliswa ngo-2008 wathembisa ukunyusa izinga lokungena kwedatha ngokuthelekiswa nobuchwephesha be-USB 2.0. Ngenxa yenyani yokuba i-USB 3.0 iyahambelana netekhnoloji yangaphambili, izixhobo ezindala zisakwazi ukusetyenziswa nge-USB 3.0 hub entsha.
Isishwankathelo sezibonelelo ze-USB 3.0
I-10x ngokukhawuleza kune-USB 2.0
Ezantsi zihambelana nesixhobo i-USB 2.0
Kutheni kufuneka kusetyenziswe ihabhu ye-USB 3.0?
Zininzi izizathu zokuba kutheni kufuneka usebenzise ihabhu ye-USB 3.0. Enye yezi zizathu kukuba kufuneka ucinge ngekamva lobugcisa. Kungekudala, izixhobo zokuphelisa ezixhasa kuphela umgangatho we-USB 2.0 ziya kunyamalala kwimarike. Oku kubaluleke ngakumbi xa ucinga ukuba into sele yenziwe, ebizwa ngokuba yi-USB 3.1 (SuperSpeed ​​+). I-USB 2.0 ke iyancipha kwaye inokungahoywa, kuba ihabhu ye-USB 3.0 ikwakhona ukuphatha izixhobo zokuphelisa ngetekhnoloji ye-2.0 nokuba kunjalo. Ukuba izixhobo zokuphelisa ezintsha ezinokuqhagamshelwa kwe-USB zithengiwe, zihlala zinikezelwa nge-USB 3.0.
I-hubs yangoku ye-3.0 3.0
I-HuaChuang i-USB 3.0 4-Port
Ukuba uthenga ihabhu ye-USB 2.0 kwaye unezixhobo zokugqibela ezixhasa i-USB 3.0, ungazisebenzisa, kodwa ke kuya kufuneka wenze ngaphandle kwesantya esikhulu se-USB 3.0. Oko akwenzi ngqondo kubuchwepheshe okanye kuqoqosho. Ukuba i-hub iza kudityaniswa kwiziseko esele zikho, ukhetho lwe-USB 3.0 hub luyacetyiswa kakhulu.
Khawuleza kangakanani ukudluliswa kwedatha nge-USB 3.0 hub?
Umgangatho wokudluliselwa kwe-hub ye-USB 3.0 uxhomekeke kwizinto ezininzi. Ukufezekisa isantya esiphezulu sokudluliselwa kwedatha, kubalulekile ukuba onke amalungu kunye nezixhobo ezichaphazelekayo zixhase umgangatho we-USB 3.0. Umzekelo, ukuqhuba i-hard drive yangaphandle ukufezekisa ukusebenza okuphezulu ngexesha lokubhala nokufunda, isango le-USB kwibhodi ephambili, ihabhu ye-USB kunye ne-hard drive yangaphandle kufuneka yenzelwe ngokucacileyo i-USB 3.0. Oku kunokubonwa kwizinto eziluhlaza ngaphakathi kwiplagi kunye ne-USB slots.
Kwenzeka ntoni ukuba ndiqhagamshela isixhobo se-USB 2.0 kwi-USB 3.0 hub?
Ngokomgaqo, akukho nto inokwenzeka enokonakalisa i-USB 3.0 hub, isixhobo sokuphelisa okanye ibhodi ephambili. Nangona kunjalo, kuya kufuneka uphile ngokuhla kwesantya esikhulu ukuba enye yezinto ezikhankanyiweyo ayixhasi i-USB 3.0.
Ngaba kukho ihabhu ye-USB 3.0 enikezela uluhlu olukhethekileyo lwemisebenzi?
Kukho ngokwenene indawo enjalo ye-USB 3.0. Iinguqulelo ezahlukeneyo ziyafumaneka. Abanye baxhasa i-WLAN, abanye banesifundi sekhadi esihlanganisiweyo kwaye ngenxa yoko asisebenzi nje njengento ephakathi yonxibelelwano phakathi kwezixhobo ze-USB, kodwa njengeziko lolawulo lokufunda amakhadi e-SD.